SithuAungmyint Archives - Page2of5- News @ M-Media
အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး (မဘသ) ဗဟိုအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဘဒ္ဒန္တ အရှင်တိလောကာဘိဝံသ အင်းစိန်ရွာမဆရာတော်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း။ ========================= စည်သူအောင်မြင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းသည်။ . ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ ( ၄ ) ရက်နေ့က[Read More…]
October 23, 2015 — Interview
စည်သူအောင်မြင့် ရေးသည်။ မဇ္ဈိမ မှကူးယူဖော်ပြသည်။ . အားလုံးသိကြပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်း လက်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ အရင် စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ ဆိုးမွေကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို လက်ခံ ရရှိထားပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ဟာ အရာရာကို[Read More…]
May 20, 2015 — ဆောင်းပါး
စည်သူအောင်မြင့် မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်၊ ၂၉-၄-၁၅။ . ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန် ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ Home ခန်းမမှာ အလွန်ထူးခြားတဲ့ စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ တစ်ခု ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်နာမည်က “[Read More…]
May 10, 2015 — ဆောင်းပါး
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ၊ ၂၀၁၅ စည်သူအောင်မြင့် ရေးသည်။ အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ကျောင်းသားတွေရဲ့ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်ပေးဖို့ ဆန္ဒပြပွဲ မပြီးဆုံးသေးခင် နောက်ထပ်ဆန္ဒပြမယ့်သူတွေက တန်းစီနေပါပြီ။ အဲဒါကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ကာလအတွင်း[Read More…]